Njem nlegharị anya agbamakwụkwọ: iku ume ndụ ọhụrụ n'ime njem na njem nlegharị anya
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Agbamakwụkwọ Romance Honeymoons » Njem nlegharị anya agbamakwụkwọ: iku ume ndụ ọhụrụ n'ime njem na njem nlegharị anya
Na-agbasa News Travel • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • Agbamakwụkwọ Romance Honeymoons • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Ahịa atụmatụ agbamakwụkwọ na-aga n'ihu, ma ọ nwere ike ịbụ niche njem nlegharị anya achọrọ iji mee ka ụlọ ọrụ njem dịghachi ndụ ka ọrịa butere ọrịa.
A na-atụ anya na ahịa atụmatụ agbamakwụkwọ zuru ụwa ọnụ ga-ebili n'oke n'oge amụma, n'etiti 2021 na 2025.
N'afọ 2021, ahịa atụmatụ agbamakwụkwọ na-eto n'ike n'ike.
Site na nnabata atụmatụ nke ndị isi egwuregwu na-arị elu, a na-atụ anya na ahịa ahụ ga-abawanye n'ọkwa a tụrụ anya ya.
Nancy Barkley, onye nhazi maka njem nlegharị anya agbamakwụkwọ n'ihi na Network Tourism Network (WTN) anọwo na-akwado na njem nlegharị anya agbamakwụkwọ chọrọ nnabata karịa n'ihi na ọ dị mkpa maka akụ na ụba ebe aga. Ọ na-eto Market Watch Newsroom maka ịhazi nke a na mwepụta akwụkwọ akụkọ ọhụrụ ha, "Azụmahịa Atụmatụ Wedding 2021 Global Share, Size, Demand Future, Global Research, Top Players Players, Emerging Trends, Mpaghara site na amụma amụma ruo 2025."
Na mbido 2020, ọrịa COVID-19 malitere ịgbasa gburugburu ụwa, ọtụtụ nde mmadụ n'ụwa niile bu ọrịa COVID-19, na mba ndị bụ isi gburugburu ụwa etinyela ihe mgbochi ụkwụ na iwu nkwụsị ọrụ. Ewezuga akụrụngwa ọgwụ na ụlọ ọrụ nkwado ndụ, ọtụtụ ụlọ ọrụ emetụtala nke ukwuu, yana ụlọ ọrụ Benomyl emetụtawokwa nke ukwuu.
Akuko Global "Azụmahịa Atụmatụ Wedding" (2021-2025) na-ekpuchi data nke ndị nrụpụta, gụnyere mbupu, ọnụahịa, ego ha nwetara, nnukwu uru, ndekọ ajụjụ ọnụ, nkesa azụmahịa, wdg, nke na-enyere ndị ahịa aka ịma maka ndị asọmpi nke ọma. Akụkọ a na-ekpuchikwa mpaghara niile na mba nke uwa, nke na-egosi ọkwa mmepe mpaghara, gụnyere nha ahịa, olu, na uru, yana data ọnụahịa.
Na mgbakwunye, akụkọ ahụ na-ekpuchikwa data akụkụ, gụnyere ụdị akụkụ, ngalaba ụlọ ọrụ, ngalaba ọwa wdg. na-ekpuchi nha ahịa dị iche iche, ma olu na uru. Ọ na-ekpuchikwa ozi ndị ahịa dị iche iche nke ụlọ ọrụ, nke dị ezigbo mkpa maka ndị na-emepụta ihe.
Global "Azụmahịa Atụmatụ Wedding" (2021-2025) na-egosi ọnọdụ na atụmanya uto nke nyocha pin-point maka mgbanwe mgbanwe mgbanwe asọmpi yana echiche na-atụ anya n'ihe dị iche iche na-akwọ ụgbọala ma ọ bụ na-egbochi uto ụlọ ọrụ. Ahịa atụmatụ agbamakwụkwọ na-enye nyocha nke ọma gbasara nha ahịa, oke, uto, oke na atụmanya nke ụlọ ọrụ atụmatụ agbamakwụkwọ. Akụkọ a na-enye ozi niile dị mkpa achọrọ iji ghọta isi mmepe na mmefu ahịa n'ahịa atụmatụ agbamakwụkwọ na usoro mgbasawanye nke akụkụ na mpaghara ọ bụla. Ọmụmụ ihe na-ekerịta ọrụ atụmatụ Wedding Planning ma n'ihe gbasara olu na ego ha nwetara na ihe a bara uru ma na-enyere aka azụmahịa. Nweta ihe atụ PDF nke akụkọ ahụ.
Iji mara ka ọrịa COVID-19 ga-esi metụta ahịa atụmatụ agbamakwụkwọ / ụlọ ọrụ, Rịọ ụdị nlegharị anya nke akụkọ ahụ.